IZITAYILE ZEBHODI YEBHODI (ISIKHOKELO SOYILO LOKUGQIBELA) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Izitayile zebhodi yebhodi (Isikhokelo soYilo lokuGqibela)
Izitayile zebhodi yebhodi (Isikhokelo soYilo lokuGqibela)
Wamkelekile kwizikhokelo zethu zebhodibhodi esisikhokelo kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zokusebenzisa uyilo lwangaphakathi.
Yintoni isiseko? I-Baseboard ludidi olukhulu olunamagama amaninzi; ibhodi yokuthambisa, i-skirting, ibhodi ye-mop, ukubumba komgangatho, isiseko sokubumba, onke la magama athetha into enye, izinto ezantsi kodonga oludibanisa naphantsi.
Iyintoni isiseko sebhodi? Ewe, ibhodi yesiseko iluncedo ngokwenyani, kunye nokongeza umdla onomdla wokubonakalayo ekhaya. Esona sizathu sibalulekileyo sesiseko sebhodi ekhoyo kukugubungela amalungu phakathi komgangatho kunye nodonga. Oku kuyakuqulatha nakuphi na ukuvuza, ukufihla nakuphi na ukungafezeki, kuthintele ukukrwela izinto phezulu, kwaye kuthintele ukubambelela kwizinto ekuqhekekeni nakwimingxunya eyenziwa zezi zixhobo zibini zidibanayo.
Ngaphezulu kwesidingo sayo, ibhodi yesiseko iye yaba sisiqwenga sokuhombisa ngokunjalo. Iibhodi ezisisiseko kunye nokubumba kuvumela enye indlela yokongeza ii-accents zokuhombisa kunye nobuntu kwisithuba esinokuthi ngobuqili siqhutyelwe kulo lonke igumbi, okanye nakwisakhiwo.
Zininzi iintlobo ezahlukeneyo, izitayile kunye nokukhetha ekufuneka kulungiswe ngaphambi kokufika kwisigqibo sebhodi efanelekileyo yeprojekthi nganye. Olunye ukhetho kunye neengcebiso zingezantsi.
Iindidi zeBaseboard Molding
Ii-intshi ezintathu ezirhangqiweyo kunye nokunyathela iBasboard
Ikota ejikelezayo yebhodi yebhodi
Isilayidi sokugqibela sebhodi
Ibhodi yebhodi eneekona ezijikeleziweyo aka Bullnose Baseboard
Isiseko sebhodi yebhodi yebhodi yebhodi esezantsi
Ibhodi yebhodi ebhalwe ngasemva
Imifanekiso eqingqiweyo ye-Mid-Height Baseboard Trim
Ibhodi yebhodi emide
Izitayile zebhodi yebhodi
Ibhodi yebhodi yaseKoloni
Iibhodi zesiseko zale mihla
Uhlobo lwebhodi yebhodi esezantsi
Iifama zeeBhodi zeeFama
Izinto zokubumba zebhodi yebhodi
Ibhodi yebhodi yomthi
Ibhodi yebhodi ye-MDF
Ubungakanani bebhodi yebhodi yebhodi
Iindleko zebhodi yebhodi
Iindleko zokufaka i-Baseboard
Ukutshintsha iBhodi yeeBhodi
Bobuphi ubungakanani beeNayile zeBaseboard
Ukupeyinta Iibhodi ezisisiseko
Ipeyinti yeBakala leBaseboard
Ungapeyinta njani iibhodi ezisisiseko ngekhaphethi
Iingcamango zebhodi yebhodi-Q & A.
Uyintoni umahluko phakathi kwebhodi yebhodi kunye netrimu?
Ngaba kufanelekile ukubumbela iibhola zesiseko?
Ngaba iibhodi ezisisiseko kufuneka zitshatise ucango lomnyango?
Yeyiphi eyona nto ibalaseleyo kwiibhodi ezisezantsi?
Ngaba i-MDF ilungile kwiibhodi ezisisiseko?
Yeyiphi eyona bhodi isisiseko yebhodi yebhodi?
Bobuphi ubungakanani bebhodi yebhodi yebhodi ekufuneka ndiyisebenzisile?
Zininzi iimilo kunye nobungakanani beebhodi ezisisiseko, kwaye nganye isetyenziselwa eyahlukileyo Uyilo lwangaphakathi Nokuba yeyokuhombisa okanye iyasebenza. Ezinye zeentlobo zokubumba kwebhodi yebhodi zinokudityaniswa kunye, kuxhomekeke kumnqweno kunye nokuba zeziphi iintlobo ozikhethayo. Umzekelo unokuba nesiseko esine-intshi ezintathu esirhangqiweyo kunye nekota eyongeziweyo ejikeleze ezantsi ukukhusela.
Enye yezona ndawo zihlala zisetyenziselwa ukuhlala ezibhodi ziibhodi ezintathu ezirhangqiweyo okanye ezinyusiweyo. Kungenxa yokuba umphezulu webhodi yebhodi yebhodi ishiyekile ukunika ikona ethambileyo yokuhombisa. Ngelixa ukuhombisa ngobumnene yenye yeendlela ezingabizi kakhulu, ngenxa yokuthandwa kwayo. Oku kuxhaphake kakhulu kuyilo lwangoku, kodwa kwakhona kulula ngokwaneleyo ukudibanisa phantse nasiphi na isitayile.
Ikota yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi ebume bekota yesangqa, yiyo loo nto igama. Ngokwesiqhelo umjikelezo omncinci kakhulu njengesiqwenga sokuhombisa esisetyenziselwa ukufihla naziphi na izithuba phakathi kwebhodi yebhodi kunye nomgangatho. Isiqingatha sekota sijikelezo sisongezo kumda ongaphandle ongaphantsi webhodi yebhodi kwaye sibhekiswa kuso njengesihlangu esisezantsi ngamanye amaxesha.
Ikota yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yenziwe ngezinto ezifanayo kunye nayo yonke ibhodi yebhodi, njengoko yongezwa kuyo.
I-Slant Fin luphawu lwebhodi esezantsi egxile kwizifudumezi zebhodi yebhodi. Oku kuhle kuzo zombini izicelo zorhwebo kunye nezokuhlala. Olu hlobo ngokukodwa lusebenzisa amanzi ashushu ukufudumeza isithuba. Ibhodi esezantsi ibilisa amanzi ukuthumela ngemibhobho. Le yimithombo efanelekileyo yokufudumeza, ngamanye amaxesha ingcono kunenkqubo yokufudumeza esembindini.
Kukho iimfuno ezithile zokufumana olu hlobo lwesifudumezi sebhodi esezantsi kwindawo nangona. Jonga iimfuno zomgangatho kunye nemibhobho ngaphambi kokukhetha olu khetho lwebhodi yebhodi.
Ibhodi yebhodi eneekona ezijikeleziweyo lulongezo olumnandi kwikhaya, ngakumbi ukuba ungomnye wabo bazifumana ukhubaza inzwane yakho rhoqo ezimbombeni. Olu hlobo lwekona lwaziwa njengekhonkco le-bullnose! Ukuba neekona ezijikeleziweyo kunika inkangeleko ethambileyo kwaye unokubopha kunye nokunye ukujikeleza kwindawo.
Oku kuthintela ukuba nomphetho ongagqitywanga. Iikona ezijikelezileyo kwibhodi esezantsi zinokukugcina kunye nezinto zakho xa ungqubeka kuyo, endaweni yokuba ube nekona ebukhali kunokukrwela izinto okanye uqhekeze ulusu, ngeekona ezijikelezileyo unokufuna kuphela ukujongana nokugruzuka okuncinci okanye ibump! Olu hlobo lunokusetyenziswa kwiindidi ezahlukeneyo zebhodi yeziseko.
Isiseko sebhodi yebhodi yebhodi esezantsi
Isikwere, okanye isiseko sebhodi ethe tyaba, isitayile esisiseko esibonelela ngokubukeka okucocekileyo. Olu hlobo luyafumaneka kuninzi lwezixhobo kwaye lulungile ukuba lusetyenziswe xa konke ukubumba kwindawo kuthethwa ukuba yeyona nto kugxilwe kuyo. Olu hlobo lwebhodi yesiseko iphindwe kabini ngaphandle kweekona ezijikeleziweyo ezichazwe apha ngasentla. Oku kubonelela ngenkangeleko ephucukileyo.
Iprofayili yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi, kwaye iphrofayili yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi. Kulapho unokufumana khona ubuchule ngendlela ebukeka ngayo ibhodi yebhodi. Olunye lolona khetho luqhelekileyo lulolu hlobo lulandelayo.
Iprofayile yangasemva yesiseko yinkqubo esika umva webhodi esezantsi endaweni yangaphambili. Oku kwenzelwa ukuba ibhodi yesiseko ibekwe phezu kwesiqwenga esele sikhona kwaye ulale eludongeni. Umva webhodibhodi ebunjiweyo inokwenziwa ukugubungela ibhodi yebhodi endala ngaphandle kokuyisusa, okanye ukuveza ezinye ngasemva isanikezela ngenkangeleko ebekiweyo.
Imizobo eqingqiweyo ye-Baseboard trim inokuba kwiindawo eziphakamileyo ezininzi, kubandakanya ukuphakama phakathi kunye nohlobo olude! Ukuphakama phakathi kwebhodi yebhodi eqingqiweyo kuhlala kumalunga ne-4 ukuya kwi-5 ½ intshi ubude kwaye malunga ne-5/8 ubukhulu. Ngohlobo oluqingqiweyo luyilwe ngendlela yokuhombisa eneempawu ezahlukeneyo ezifana ne-scallops okanye amanyathelo abuyela eludongeni ukongeza umdla kwibhodi esezantsi.
Inguqulelo emide kule trim ebhodi esezantsi ekhankanyiweyo isebenza malunga nee-intshi ezintlanu ukuya kwii-intshi ezi-7 ubude, kwaye ilungelelanisa nobungakanani bokuphakama phakathi ko-5/8 intshi ubukhulu. Olu hlobo lwe-trim longeza isandi esibukhali kwibhodi yodonga.
Oku kufana nebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yokuphakama eqingqiweyo kunye neescallops kunye namanyathelo afakiwe kuyilo. Njengokuba inde njengeyona nto isetyenziswayo, ikwanyusa amaxabiso kancinci, isenza ukuba ibize kakhulu kunogxa wayo omfutshane. Kwiindawo ezinophahla oluphezulu okanye imifanekiso emikhulu yesikwere olu hlobo lwebhodi yesiseko lunokubaluleka kakhulu ekugcineni ubukhulu buchanekile kwaye lungenzi ukuba itrimu ibonakale incinci kwaye ingekho ndawo.
Ngoku ukutshatisa isitayile sebhodi yakho esezantsi kunye nesitayile sekhaya lakho kunokuba yinto encinci emva kokuzibandakanya kuzo zonke ezinye izinto ekufuneka uziqwalasele. Apha ngezantsi kukho imizekelo embalwa kunye neengcebiso ngohlobo oluthile lwamakhaya.
Uyilo lobukoloniyali luyaziwa ngokuba lukudidi kwaye lusebenzise izinto ezininzi zokuhombisa. Umthi yinto ekufuneka isetyenzisiwe, kuba yile nto yayifumaneka ngexesha lesimbo. Izinto ezinzima kunye nokuhonjiswa okuninzi zisetyenzisiwe kuwo onke amakhaya, ekwabekwa kuwo wonke uyilo lweebhodi ezisezantsi.
Imibala yendalo kwaye ingakhathalelwanga kakhulu iziswa kwiibhodi ezisisiseko kwisitayile sobukoloniyali. Rhoqo umhlophe okanye umthi wendalo ushiyekile. Ukubumba isithsaba kunye nomgaqo weedado ziyathandwa kuyilo lobukoloniyali kwaye zilungelelaniswe neebhodi ezisezantsi.
Uyilo lwala maxesha lisebenzisa uninzi lwemibala engathathi hlangothi, kwaye ayijongi kakhulu kwiibhodi ezisisiseko ngokukodwa, ngenxa yesimo esincinci sesitayile. Oku kukhokelela kwiibhodi ezisisiseko ukuba zinombala ofanayo kwepeyinti yodonga, okanye into ethambileyo nomhlophe ukuyigcina ime ngaphandle. Ngokubhekisele kwimilo yokugcina uyilo lwangoku kuyacetyiswa ukuba ufumane isiseko esincinci kakhulu esingenayo nayiphi na imilo yokuhombisa kuso. Oku, kwakhona, kuyadibana nobuncinci bokuyilwa kwale mihla.
Ukuzonwabisa ngakumbi, zininzi iindlela zebhodi yebhodi yesiseko ephumayo ebonisa uyilo olwenziweyo olunemiphetho ethe nkqo. Esinye isitayile esidumileyo kuyilo oluhlaziyiweyo apho eyona bhodi isisiseko isethwe eludongeni uqobo.
isicatshulwa kwintombazana ehloniphekileyo yentetho
Isitayile segcisa, njengoko igama lisitsho, konke malunga nomkhandi! Kulapho ke baqala khona ukuyila ngezinto ezikhoyo. Ezi bhodi zenziwe ngesandla zizinto ezisisiseko kwikhaya lesitayile ngenxa yengqwalaselo enkulu yokwakhiwa kwe-ins, ukubumba kunye nokwenza izinto. Ngokwesiqhelo ezi bhodi zisisiseko zenziwe ngendlela elula kwaye zenziwe ngomthi onzima oqinileyo.
Izitayile zebhodi yezindlu zasefama zishiya isithuba ngokungekho sesikweni nangokwesiko. Rhoqo kwiibhodi zebhodi yebhodi zizinto ezikhethiweyo njengoko yonke indlu inesitayile kusetyenziswa imithi.
Ukubumba isithsaba kunye neebhodi ezisisiseko ezilula zixhaphakile kuyilo lwendlu yefama. Kule ndlela unokufumana imibala edlamkileyo okanye ukhuni olucocekileyo kwiibhodi zesiseko ukuze ulungelelanise nendawo yonke. Zonke ezi zihambelana nohlahlo-lwabiwo mali, kuba uyilo olulula lukhethwa xa kuthelekiswa kunye noyilo olucokisekileyo kunye nokubumba okunokunyusa amaxabiso.
Kukho uninzi lwezinto onokukhetha kuzo xa kuziwa ekukhetheni izinto zebhodi yeziseko zekhaya lakho, kwaye unethamsanqa ngokwaneleyo uninzi lwezi zinto zivumela naziphi na iintlobo, izitayile kunye neeprofayili ezixoxwe ngasentla. Ukuyizisa phantsi kwezinto zokwakha kuzinyanzelisa ngokwenene iindleko kunye nendlela yokufaka engamanyathelo alandelayo enkqubo.
Isiseko sebhodi yomthi yinto entle nendalo enokongezwa kwikhaya. Olu lolunye lwezona zigqibo ziphakamileyo zebhodi yebhodi, kodwa oko kuza nexabiso elikhulu xa kuthelekiswa nezinye iindlela. Iibhodi zebhodi eqinileyo zihamba ukusuka kwi- $ 1 ukuya kwi- $ 3 ngokuxhomekeke kumgangatho weenkuni ezikhethiweyo.
Ukukhetha umthi onzima webhodibhodi kulungile ngenxa yokukwazi ukungcolisa nawuphi na umbala kwaye ibubutyebi bendalo kwaye buyavuseleleka. Uninzi lweenkuni aluzi kuqala, oko kuthetha ukuba kukho umsebenzi ongaphezulu omncinci ngaphambili, kodwa ekugqibeleni kunokuba kufanelekile ukuba ngesiseko sokhuni olufudumeleyo.
IPine Baseboard luhlobo oluthile lwebhodi yebhodi yebhodi. Olu hlobo lwebhodi yesiseko sokhuni lukhetho olukhulu ngakumbi kwiprojekthi exhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali. Ipine edibeneyo inyangwa kwangaphambili kwaye iyathandwa, ekhupha kunye namaqhina, isoyikisa kwaye ikwenzela ukufakwa ngokulula ngenxa yokuguquguquka kweenkuni.
Le bhodi isisiseko inee-seams ezininzi ezibonakalayo abanye abantu abangazithandiyo, ke ukungcolisa ubumnyama bokhuni kunokunika umbono ongcono, kodwa awunakho ukufihla ngokupheleleyo amalungu ngokudibeneyo.
La malungu akhankanyiweyo ancanyathiselwe ndawonye, ​​anokuqulatha imichiza eyingozi ekufuneka umntu eyilumkele. Ixabiso elidibeneyo lepineboardboard libaleka ukusuka kwi- $ 1.50 ukuya kwi- $ 3.00 ngeenyawo zomgama. Kwibhodi yebhayini yepine ngaphandle kwamalungu ngamaxabiso asezantsi kakhulu aphantsi kwedola ngonyawo olunye, kodwa oko kuza ngaphandle kokukhululeka kunye neempawu ezilungileyo zokudityaniswa.
I-Oak Baseboard ngumthi obiza kakhulu, kodwa lukhetho olukhulu xa kufikwa ekunciphiseni iinkuni. Le yimveliso efumaneka ngokulula ngokunjalo. Ukubanako ukungcoliswa kukuvumela ukuba kuhambelane ngokuchanekileyo kunye nomgangatho okanye izinto zomthi kwindawo. Oku kongeza ukubukeka okumanyeneyo okumangalisayo kwisakhiwo okanye kwigumbi.
Ukuma kwe-MDF okanye ifreyibhodi exineneyo ephakathi, yile nto yenziwe ngayo. I-MDF yenye yeefom ezisisiseko okanye ibhodi yebhodi, kodwa inzala inokudibaniswa ukuyenza ibe yiprofayili kunye nokupeyinta umbala wokhetho. I-MDF ipeyintwe kuba ingenayo ingqolowa yeenkuni ukuyenza ibala okanye ukumhlophe.
Le mveliso kulula ukuyisebenzisa kuba ithambile kwaye ihlala iqalile, oko kuthetha ukuba inyathelo elongezelelweyo umntu anokuzifaka kulo unokuliphepha. I-MDF ikwangumbandela wexabiso elifanelekileyo, osebenza malunga ne- $ 0.65 ukuya kwi-0.90 yeedola ngeenyawo zomgama.
Ngelixa i-MDF iluhlahlo-lwabiwo mali oluphantsi kwaye kulula ukuyisebenzisa kwimveliso, ayisiyongqangi kwindalo esingqongileyo. I-MDF yenziwe nge-resin, kunye nemicu yeenkuni eshushu kwaye icinezelwe kakhulu ukwenza i-baseboard. Ezi nkunkuma ezisetyenziswa njengezibophelelo ziqulathe i-formaldehyde, enokucima igesi, ngakumbi xa imanzi. Unokufunda ngakumbi malunga MDF vs iinkuni Apha.
Ngokwesiqhelo xa ucinga nge-PVC ucinga ngemibhobho ye-PVC, esetyenziselwa ukulungiswa kwemibhobho yamanzi kunye nezinye iiprojekthi. Ukuba esi sixhobo sihlala sisetyenziselwa ukufakwa kwemibhobho yamanzi, emva koko kufuneka sibe neempawu ezinganyangekiyo ezinokusetyenziselwa ezinye izinto, njengebhodi esezantsi, kwaye iyenza njalo.
Izinto zokwenziwa zePVC ziyamelana namanzi kunye nezinye izinto. Olu hlobo lwebhodi yesiseko kunye nokubumba kulungile kwiikhitshi nakwizindlu zangasese apho amanzi exhalabisa khona. Ngobuchule bePVCs bokumelana nezinto, inokusetyenziswa nakwiindawo ezingaphandle.
Ngelishwa, i-PVC akukho lula ukuyifaka njenge-MDF, i-PVC ifuna imingxunya yokomba kuyo yonke indawo ekubekwa kuyo isikhonkwane, kungenjalo i-PVC inokuqhekeka. Ngaphezulu kwento yokwenziwa kwezinto ayilunganga kokusingqongileyo. Kukho inani lokusingqongileyo kunye nokukhuselwa kokuqwalaselwa xa kuziwa ekusebenziseni i-PVC kwindawo. I-PVC nayo iphezulu kakhulu kwiindleko kune-MDF ekhankanywe ngaphambili, i-PVC ibaleka malunga ne- $ 2 ukuya kwi-6 yeedola ngomgama onyawo.
Iplastibhodi yesiseko inokungena phantse kuwo nawuphi na umbala kunye nesitayile, kwaye inokuveliswa ngesixa esikhulu ukonga kwiindleko. Oko kuthethiweyo, umbala owuthengayo ngaphambili ngumbala ohleliyo, ukupeyinta iplastikhi akuhambi kakuhle xa uzama ukutshintsha umbala kwixa elizayo.
Iplastikhi yinto eyomeleleyo yebhodi yebhodi esezantsi, kodwa lolunye uhlobo oludinga ukuba kugrunjwe imingxunya kuyo ngaphambi kweenzipho ukuthintela ukwaphuka okanye ukuqhekeka. Nangona zomelele, azinabhetyebhetye, oko kuthetha ukuba iplastikhi ayisiyonto efanelekileyo kwiindonga ezigobileyo okanye ukujikeleza iikona ngaphandle kwemithungo. Iibhodi zeplastikhi ziyabola kwaye azinaxhala kodwa azinabungozi kwindalo.
IVinyl baseboard inokufana okuninzi kwiplastiki ekhankanywe apha ngasentla. IVinyl baseboard yomelele kwaye iyafumaneka kuwo nawuphi na umbala onokucinga ngawo. IVinyl baseboard iza kwimiqolo emide ngelixa ibambelele eludongeni ngento eyomeleleyo yeglu.
IVinyl yomelele, kulula ukuyigcina kunye neendleko ezifanelekileyo xa kuthelekiswa nerabha. Ukongeza kulula ukufaka kunye neendleko ezifanelekileyo. Ngelishwa i-vinyl inokuqhekeka okanye ijike ngokuhamba kwexesha ukuba ayiphathwanga kakuhle kwaye iyakhathalelwa. Olunye ulwazelelo alunakupeyintwa kwaye lunokutsala ukungunda.
Iibhodi zeziseko zeVinyl zihlala zisetyenziswa kumagumbi okuhlambela njengoko zibambelele kakuhle kwiimeko ezimanzi. Iibhodi ezisisiseko zeVinyl azicetyiswa kwigumbi lokuhlala. Amagumbi okuhlala kubhetele ukusebenzisa i-MDF baseboard okanye i-hardwood.
IVinyl kunye neerabha yesiseko sabelana ngeempawu ezininzi. Irabha ikumgangatho ophezulu kwaye iza ngexabiso eliphezulu. Ngelixa i-vinyl yomelele kakhulu kwaye kulula ukuyigcina, irabha inyanzela ezo mpawu nokuba kude kube zezona zinto zibalaseleyo.
I-baseboard emhlophe lukhetho oluqhelekileyo ngenxa yokuhambelana nayo nantoni na enokuthi iziswe esithubeni, eluncedo ukuze ibhodi yebhodi ekwaziyo ukulingana kuwo onke amakhaya, kwaye ayisiyonto ihlala ithathelwa indawo. Ukugcina kwakhona ibhodi yesiseko kumbala weenkuni zendalo ukuba yinto eqhelekileyo kunye neendleko.
Eminye imibala ethandwayo inokunxibelelana nesikimu segumbi elibekwa kwisiseko. Abanye abantu abanakucinga ukuba i-baseboard ibaluleke kakhulu, kodwa ukuba ithathwa ngokungathí sina banokugxininisa kwigumbi okanye babangele umdlalo weqonga.
Ukuyigcina ilula, ukukhetha umbala ube mnyama ngaphezulu kombala wodonga unika igumbi imvakalelo ecocekileyo yokulungelelaniswa. Kwindawo engenamdla kangako, mhlawumbi ukukhetha umbala oqaqambileyo kunokwenza igumbi liphume kwaye linokusebenza njengesiqendu, ngakumbi xa udlala ngeeprofayile zebhodi esezantsi.
Ngokwesiqhelo xa kufikwa kwisiseko sodonga, isiseko ngokwaso sibaleka malunga ne-½ ye-intshi ukuya kwi-intshi enye ubukhulu. Ngokubhekisele kubude buyahluka ngesitayile kunye nomnqweno. I-Baseboard inokuba naphina ukusuka kwii-intshi ezi-3 ukuya kwii-intshi ezi-8 ubude. Oku kunokumiselwa liqela leemeko.
Umsesane we-halo wokuzibandakanya neqela lomtshato
Ukuba kukho isithsaba sokubumba okanye ezinye iintlobo zokucheba ukuhombisa kubalulekile ukuthathela ingqalelo ubungakanani phakathi kwezi zimbini. Kwilizwe eligqibeleleyo ukuba udonga lumalunga ne-8 yeenyawo ubude, iibhodi ezisisiseko zimalunga nee-intshi ezintathu ukuya kwii-intshi ezintlanu ubude, ngelixa kukho udonga lweenyawo ezili-10 inokuba zii-intshi ezintlanu ukuya kwii-intshi ezisi-7 ubude.
Iindleko zinokuba yinxalenye enkulu yeprojekthi, ukubetha okanye ukuphosa nokuba ingaba iyenziwa nyani. Into emnandi malunga nebhodi esekwe kukuba ayifanelanga ukuba yiprojekthi eyaphula ibhanki, kodwa inokuba nefuthe elikhulu kwisitayile sasekhaya kunye nokuziva. Elinye ixabiso, kunye namaqhinga okufumana ixabiso apho uyifunayo.
I-Baseboard inokwahlula amaxabiso ngokusekwe kwizinto ezikhethiweyo kunye neenkcukacha ezahlukeneyo kunye neempawu zokuhombisa ezibandakanyiweyo kwibhodi yesiseko uqobo. Ngokwesiqhelo, olu luhlu lususela kwi-0.60 yeedola ukuya kwi-1.20 yeenyawo ngomgama onyawo. Zonke ezinye izinto zokubumba kunye nezitrato zinamaxabiso afanayo kwaye zihlala zenziwa ngamaxesha afanayo njengoko zihlala zihamba kunye.
Inxalenye yofakelo ngokwayo yenye yezona ndawo zibiza kakhulu. Ukususwa kwebhodibhodi yakudala kunye nokufakwa kwezinto ezintsha kuqhelekile malunga ne- $ 1000 ngaphandle kokubandakanya zonke izinto ekufuneka zithengiwe. Mhlawumbi ezo ndleko yinto onokuthi uyinkqonkqoze ngokwenza iprojekthi ngokwakho? Ukuba kunjalo qiniseka ukuba unomntu onamava amancinci kwaye uqiniseke ukuba ufunda ezona nkqubo zingcono zokususa kunye nokufaka i-baseboard ethile onokuthi uyiphephe ukubiza abaqeqeshi nangayiphi na indlela ukucoca ubumdaka bakho.
Ukuphulwa kwezinto eziphathekayo kungabonakaliswa kangcono kwixabiso. Kwicandelo le-8 leenyawo (malunga nobude bodonga olunye kwigumbi lokulala) i-MDF okanye i-PVC iibhodi zebhodi zibiza malunga ne- $ 10, kusetyenziswa uyilo lwesiseko, akukho nto intle kakhulu. Obo bude bude kunye noyilo kodwa lwenziwe ngomthi lumalunga ne- $ 25. Kukhetho olubiza kakhulu i-polyurethane ibaleka malunga ne-32 yeedola kwibhanti yeenyawo ezisibhozo. Ukongeza ii-accents ezongezelelweyo okanye isiqwenga (njengekota yomjikelo) yongeza imali ngaphezulu kwisiqwenga ngasinye.
indlela yokwenza eyakho ukugcina imihla
Ukutshintsha iibhodi ezisisiseko kuzakuhamba enye yeendlela ezimbini; uza kukroboza iindonga, okanye awukho. Le ayisoloko iyinto oya kuthi ugqibe ngayo, ke zilungiselele okona kubi. Nokuba uthatha indawo enye kuphela yebhodi yebhodi eyonakalisiweyo, okanye uyisusa yonke le nto, inkqubo iyafana; inye kuphela ithatha ixesha elide.
Ukuqala, kuya kufuneka ususe ibhodi esekwe ekhoyo. Ezi kufuneka zibethelelwe ngaphakathi kwaye zinokubanjiswa kwimiphetho. Ukuba kukho i-caulk, sebenzisa isitshetshe okanye enye into ebukhali ukophula eso tywina ukuze ukwazi ukufaka isixhobo sokuprinta okanye umva wesando phakathi kodonga kunye nebhodi esezantsi.
Emva koko, sebenzisa isixhobo sokuprinta okanye isando ukususa naziphi na iziqwenga zebhodi esezantsi ongasayifuniyo eludongeni. Qaphela ukuthintela ukukhwabanisa kunye nokutshixiza udonga ngasemva kangangoko kunokwenzeka, kuba kuya kufuneka ubuye umva uyilungise ekugqibeleni.
Nje ukuba yonke into isuswe, faka nje kwakhona nayiphi na ibhodi yesiseko oyilandeleyo kwimiyalelo nganye oyithengileyo.
Ubungakanani bezikhonkwane ekufuneka zisetyenziselwe ukubethelelwa kwi-baseboard trim zii-intshi ezi-1 intshi. Imingxunya yezikhonkwane kufuneka igqitywe kwangaphambili kwezinye izinto ukunqanda ukwahlula okanye ukuqhekeka izinto zebhodi esezantsi. Jonga izinto ezithile ukuze ubone iimfuno kunye nezilumkiso. Ezi zikhonkwane sinokuzifaka sisebenzisa isikhonkwane samandla esikhonkxiweyo, okanye zinokufakwa ngokusebenzisa ihamile ethembekileyo ye-ole kunye namandla engalo.
Inxalenye elungileyo yeebhodi zesiseko kufuneka zipeyintwe, kwaye ekuhambeni kwexesha kupeyintwe ukulungiswa okanye ukutshintsha umbala. Ngokupeyinta ibhodi esezantsi ibanika amandla okuba babe mhle kakhulu nakweyiphi na imibala onokucinga ngayo. Nangona kunjalo, owona mbala uthandwayo ukuza kuthi ga ngoku ziibhodi ezimhlophe zokutshatisa ezinye izinto ezimhlophe ezijikeleze iifestile kunye nokubumba kwesithsaba.
Iibhodi zebhodi yeenkuni kunye ne-MDF zinokupeyintwa, ngelixa isenokungabi ngumbono olungileyo ukupenda i-vinyl okanye iirabha ezikhethiweyo. Ngokwesiqhelo i-MDF iphakanyisiwe kwangaphambili ukongeza amandla, kodwa ukuba ayiqinisekiswanga ukuba ibekwa phambili ngaphambi kokufaka ipeyinti kuyo. Ukhetho lwemibala alunamkhawulo xa kufikwa kumzobo, owenza i-MDF kunye neenkuni ukhetho oluthandwayo
Elona banga liphezulu lokupeyinta iibhodi ezisisiseko sisiglasi. Olu hlobo lwepeyinti lulungile ekucoceni kwaye lune-sheen encinci kulo nje ukuba ungabizi isixa esingafunekiyo sokuqwalaselwa kuyo. Ukujonga okuthe nkqo kuyapeyinta iqokobhe leqanda. Ipeyinti ye-Egghell inokukufihla ukungafezeki kwaye ithintele nayiphi na imitha okanye ikhanye kwiibhodi ezisezantsi.
Okokuqala, ukufumana ipeyinti esekwe ngaphambili yeyona ndlela ilula yokuphepha ukupeyinta ikhaphethi, kodwa ukuba ubuza lo mbuzo, ndicinga ukuba ayisiyiyo loo nto. Ngamanye amaxesha ibhodi yesiseko ifuna ukuphindwa ipeyintwe okanye ichukunyiswe, okanye mhlawumbi kukho umnqweno wokujonga okutsha kwaye esi sisisombululo esinexabiso eliphantsi kunye nexesha.
Ipeyinti yokupeyinta kunye neplastiki banokuba ngabancedisi abakhulu kule meko. Ukuthinta isheer enkulu yeplastiki emazantsi e-trim (ngenene uyifumane apho) kuthintela ukuchitheka ngengozi okanye ukubhabha kwiibrashi zokupenda. Mna ngokwam ndaziwa ngokungazihoyi okanye ukwenza umsebenzi ombi kweli nyathelo kuba ndifuna ukuba lenziwe ngokukhawuleza, kodwa ukukhusela ikhaphethi oku kufuneka kube lilinye, kwaye akunakubakho khaphethi iveziweyo okanye iya konakala.
Ngokulula, i-baseboard luhlobo lwe-trim. I-trim ligama elipheleleyo lalo naluphi na ulwakhiwo kunye nokusila. Ibhodi esezantsi sisiseko esithile esibekwe apho umgangatho kunye neendonga zidibana khona. Ibhodi esezantsi isetyenziselwa ukugubungela icandelo apho udonga kunye nomgangatho udibana khona, ngelixa i-trim inokugubungela indawo leyo isakhelo somnyango sidibana nodonga okanye udonga luhlangana nesilingi. Iibhodi ezisezantsi zichazwe ngokuthe ngqo kwisiseko sodonga-yiyo loo nto igama.
Ngelixa ingeyomfuneko, kwaye ibhodi yezihlangu ingabonwa kakuhle, kungcono ukuba utshatise ukubumba ngokusemandleni, okanye ubuncinci ubenze balungelelanise. Umzekelo wokubumba izihlangu sisiqingatha sekota yesiqwengana, esiqhele ukuba sesona nto sinepeyinti efanayo nesiseko sonke esiqhotyoshelwe kuso.
Kwakhona, akuyomfuneko ukuba i-baseboard kunye ne-door trim match, kwaye kuninzi lwezicelo zorhwebo oku akunjalo. Emakhayeni, kuhlala kulunge kakhulu ukufumana i-trim efanayo kunye neebhodi ezisisiseko zokugcina ukujonga okuhlangeneyo kwindawo yonke. Kwiimeko apho kufuneka ubenocango lwesinyithi kusenokwenzeka ukuba i-trim kunye ne-baseboard kufuneka yahluke.
Inkuni yeyona nto ibalulekileyo kwiibhodi ezisezantsi. Ngelixa nganye yezixhobo inempawu zayo ezikhethekileyo kunye neenkuni ayizizo ezona zibiza kakhulu kodwa amaxabiso axabisa umgangatho. Iinkuni zizinto ezomeleleyo ezinokuthatha ukubetha kwaye zitshintshwe ngokulula. Kukho iindawo ezithile ezifuna ezinye izinto (iindawo ezimanzi kunye nePVC) kodwa ekugqibeleni iinkuni lukhetho olukhulu kwiibhodi ezisisiseko.
I-MDF ilungile kwiibhodi ezisisiseko, ayisiyiyo eyona ilungileyo, kodwa ilungile. Umthi ulunge nje kancinci kune-MDF kwaye i-MDF iza ngexabiso eliphantsi kuneenkuni ezinokuba yinto elungileyo kakhulu kwabanye abantu. Kwakhona, kukho iindawo ezithile apho i-MDF ingalunganga, kodwa yiyo loo nto besenza i-PVC kunye neebhodi zerabha.
I-intshi ezintathu ezirhangqiweyo okanye inyathela ibhodi yebhodi yeyona nto ixhaphakileyo yebhodi yebhodi. Olu hlobo lunika intwana yoyilo kwibhodi esezantsi kunye neenkcukacha ngaphandle kokuya ngaphezulu kwebhodi kwaye iyenza ibe nzima. Oku kuhle ukuba kungene kumakhaya ahlukeneyo esitayile kwaye kulula ngokwaneleyo ukuba uhlale kwindawo efanelekileyo yamaxabiso.
Ubungakanani bebhodi yebhodi ekufuneka uyisebenzisile isekwe kubungakanani bodonga lwakho kunye nendawo. Ngokubanzi ngeendonga ezinkulu (njengokuthile okuziimitha ezili-10 ubude) kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe isiseko se-intshi esi-5 ukuya kwisi-7 intshi. Izakhiwo zorhwebo zihlala zisebenzisa isiseko se-intshi ezi-6. Ngeendawo ezincinci, eziqhelekileyo zokuhlala eziphakamileyo (8 iinyawo ubude) kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe i-baseboard 3 intshi ukuya kwii-intshi ezi-5-indawo yokuhlala eqhelekileyo ziibhodi zebhodi ezi-4.
Ngenye igalari ehambelanayo jonga inqaku lethu malunga imibono yokuwola .
Gorilla Cacisa ukuBamba ukuNamathela,… $ 9.28 umthengisi ogqibelele (7892) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
imifanekiso yamagumbi okulala amahle
X5 PACK TECLED 4ft. 46 'LED Aluminium P ... $ 32.50 yeedola umthengisi ogqibelele (10) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ukuhonjiswa kweOrac | Impembelelo ephezulu yePolystyrene Baseboa… $ 9.99 ngexabiso umthengisi ogqibelele (14) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Baseboard Ukubumbela 4-3 / 4 'Ubude 96' Ubude… $ 155,99 umthengisi ogqibelele (3. 4) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
ingoma yothando r & b
indlela yokujongana neemvulophu zomtshato
ixabisa malini umtshato ongabizi
iinwele zomtshato ziba nesiqingatha phezulu
Indawo efanelekileyo yokuthenga iilokhwe zontombi